မျိုးနဲ့ ရိုးနဲ့ မိမိဂီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Drama, Essays.. » မျိုးနဲ့ ရိုးနဲ့ မိမိဂီ	33
မျိုးနဲ့ ရိုးနဲ့ မိမိဂီ
Posted by ムラカミ on Apr 20, 2015 in Drama, Essays.., Food, Drink & Recipes, Marketing, My Dear Diary | 33 comments
ဖားသားကြီး ဘာကြိုက်​တုန်း​မေးရင်​ အ​ဖြေက ရိုးရိုး​လေးရယ်​
တခွန်းတည်း​ဖြေလိမ့်​မယ်​ သရက်​သီး လို့
အပင်​စိုက်​ ၀ါသနာပါပြီး သစ်​ခွစိုက်​ အင်​မတန်​ကျွမ်းကျင်​တဲ့သူ့ကို အကြင်​သူသည်​ သရက်​သီးတလုံး လက်​ကကိုင်​ပီး ဒါဘာသရက်​တုန်း​တော့ သွားမ​မေး​လေနဲ့
အမျိုးအစားခွဲဖို့ စိုက်​ဖို့ဆိုတာထက်​ စားစရာလို့ပြဲမြင်​​တော့တာကိုး အဲ့လို
မိမိဂီ ကျ​တော့ ​ပြောင်းဖူးခည
ယဲဇားနဲ့ချိန်း​တွေ့တုန်း နှာ​ခေါင်းထဲ ​ပြောင်းဖူးပြုတ်​နံ့ရလို့ ခန​နော်​ဆိုပြီး ​ပြောင်းဖူးအရှာထွက်​
​တွေ့​တော့ဝယ်​စား ယဲဇားကို​မေ့သွားပီး ​ပျော်​ပေျော်​ကြိီး အိမ်​ပြန်​သွားတာ ပြတ်​ပါ​ရောလားဗျာ
​ပြောင်းဖူးနဲ့ပတ်​သတ်​ပီး ငယ်​ငယ်​က ငိုဖူးသဗျေ
​ဟော်​တယ်​​တေမှာမှ ရမယ့်​​ပြောင်း​ဆိုပီး ​ဟော်​တယ်​​ပြောင်းလို့ ​ဈေးသယ်​​တေကသမုတ်​ပီး​ရောင်းလိုက်​ပါသတဲ့ အိမ်​​ဖော်​​ကောင်​မ​လေးကို
ဆို​တော့ ချာတိတ်​က​လေး မိမိဂီလည်း သူေ​ဈေးသ်ွားတိုင်း ​ဟော်​တယ်​​ပြောင်းမှာရတာအ​မော​ပေါ့​လေ
ဂလိုနဲ့ ​ခြောက်​လတစ်​နှစ်​ကြာ​တော့ ​​ဘေဘီကွန်း ​ပေါ်လာပါ​ရောလား
ခု​ခေတ်​လို သာမန်​စား​သောက်​ဆိုင်​မှာ အစိမ်း​ကြော်​မှာစားရင်​ ​ဘေဘီကွန်းမပါဘူး​လေ
​ဟော်​တယ်​မှာ မှာစားမှ ပါတာဆို​တော့ ​ဘေဘီကွန်းကို ​ဟော်​တယ်​​ပြောင်း ဆို​ဈေးသယ်​​တွေ နာမည်​တပ်​ကြပြန်​ပာါေ​တော့တယ်​
ဒါ​တွေနားမလည်​​သေးတဲ့ ချာတိတ်​​လေးမိမိဂီခညာ ငိုလိုက်​ရတာဗျာ နာမည်​ကျတူပြီး တ​တောင်​ဆစ်​​လောက်​နဲ့ လက်​ညှိုး​လောက်​ အရွယ်​ကွာတဲ့်​​ပြောင်းဖူး​တွေနဲ့ပတ်​သတ်​ပြီး
​အော်​ ​ပြောင်းတို့၏မာယာ ပါတကား
ငုံ့​နေတဲ့ စိနဂျင်းန်းက ပြန်​ထတယ်​ထင့်​
​ခေါက်​ဆွဲ ​ပေါက်​ဆီ နဲ့ ဟင်းချိုကို ဂျွမ်းထိုးပီးကြိုက်​သလို
သရက်​လည်း.လာခဲ့ ​ပြောင်းလြဲ ဆွဲမယ်​ ဆိုတာချည်းပဲ ​ရေခဲမုန့်​လည်း ချမ်းသာမ​ပေးပြန်​ဘူး​လေ
​ရေခဲမုန့်​ဆိုတာက သူ့အဘွား ကျ​နော့်​အ​မေရဲ့ အသီး​ကျော်​ခည
ရှမ်းပြည်​မှာ​ရေခဲ​နေပါတယ်​ဆိုတဲ့အချိန်​​တောင်​ အ​နွေးထည်​၀တ်​လို့ ​ရေခဲမုန့်​အရှာထွက်​တတ်​​သေးတာရယ်​
ဟဲ့ ငဂီ ငါ့အသုဘကျရင်​ လာတဲ့ပရိတ်​သတ်​ကို ​မုန့်​ဟင်းခါးမ​ကျွေးနဲ့ ​ရေခဲမုန့်​အ၀​ကျွေးစမ်း တဲ့အဲ့လို ပါဆို
ဒါ​ပေမယ့်​ ဟို​လေ အ​မေ့အသုဘပါဆိုမှ​တော့ အ​မေက​တေဘီပဲဟာ စားနိုင်​​တော့မှာမှမဟုတ်​ပဲ ဘာ​ကျွေး​ကျွေး​ပေါ့ ဆို​တော့ ဘာပြန်​​ပြောတယ်​​အောက်​​မေ့တုန်း
ဟဲ့အ​ကောင်​ ငါ့အသုဘ ငါ​ကျွေး​စေချင်​တာ ငါစီမံမယ်​ ငါကြိုက်​တဲ့အစားအစာ ငါ့ပရိတ်​သတ်​ငါ​ကျွေးမယ်​ နင့်​အသုဘကျမှ နင်​ကြိုက်​တာနင်​​ကျွေးဖို့စီမံ ဒါပဲတဲ့
အဲ့လို ကျုပ်​တို့အမျိုးက အဲ့လိုပါဆို
အသုဘဆို မုန့်​ဟင်းခါး​ကျွေးရမယ်​လို့ စာချုပ်​မှချုပ်​ထားတာမှမဟုတ်​ပဲ ကြိုက်​တာ​ကျွေးမ​ပေါ့
အသုဘရက်​လည်​ အ​ကျွေးအ​မွေးကန်​န ကို re-defind လုပ်​သူ
Mr. MarGa says: ရှိရှိသမျှ gene တွေ ကျန်ကိုယ်တော်​ဆီ သָွားစုနေသလားဟင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဟိုလူကြိုက်​တာလိုက်​ကပ်​စား
ဒီလူကြိုက်​တာ လိုက်​ကပ်​စား နဲ့
အစုံကြိုက်​ အစုံစားသတ္တ၀ါ ​အေုာံမ်​နီဗိုးရပ်​စ်​ ဖြစ်​လာတာပါပဲဗျာ
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဟမ်​ဘာကာ အရင်​မှာပါ​လေ
Alinn Z says: .ဟို မာမီမိုးဆိုတဲ့ မိုးမာမီလည်း ဘာထူးလဲ
.ပြောင်းဖူးဆို အသေရရ အရှင်ရရ
အိုးးး ကုန်ကုန်ပြောရရင် ပြောင်ဖူးဆို ပြောင်းဖူးရိုးအထိ ကြိုက်တာတဲ့။
မိမိဂီရော ပြောင်းဖူးရိုး ကြိုက်လား
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဖက်​ကြမ်းလိပ်​​သောက်​တာ​နေမှာပါဆက်​ဆက်​ရယ်​
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပြောင်းဖူး သိပ်မကြိုက်ဘူးဗျ..
အကင်တို့ ဟော့ပေါ့တို့ သွားစားရင် ပြောင်းဖူးက လွဲလို့ ကျန်တာ အကုန်စားတယ်.. ဟိဟိ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ကျုပ်​​ပြောင်းဖူးသာ မစားခဲ့မိဘူးဆိုရင်​
ဒီဘ၀မယ်​ လူဖြစ်​ရတဲ့ အရသာ တစုံ့တရာ
naywoon ni says: အင်း ​ပြောင်းဖူး ကြိုက်​တယ်​ဆို​တော့ စဉ်းစားစရာပဲ ။ အူတိုင်​​တွေ ဘယ်​လွှင့်​ပစ်​လဲဟင်​ ¿¿¿
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: မာမီမိုး နဲ့ ဆက်​ပန်​ထုံ လာလာ​ကောက်​သွားသဗျ
Ma Ma says: လူတကိုယ်အကြိုက်တမျိုးဆိုတဲ့ စကားပုံကို သက်သေပြနေတာထင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ညီ​တော်​​မောင်​ကျ လက်​ဖက်​ဗျ
မြစပဲရိုး says: ဒီ စာမျိုး လေး တွေ ကို ရွာထဲ လွမ်း နေတာ ကြာပေါ့။
. ပြောင်းဖူး ကြီးကြီး မျှော် နေတာ ပြောင်းဖူးလေး ဘဲရလို့ ငို နေတဲ့ မိမိဂီ ကို မြင်ယောင်ပြီ ရီ လိုက်ရတာ။
. ရေခဲမုန့်ကြိုက် တဲ့ မာမား ကြည့်ရတာ စိတ်ကြီးပုံဘဲ။ ကျန်ကိုယ်တော် လေး ရော စာမေးပွဲ အောင်တယ် မဟုတ်လား။
ဒီနှစ် ဘယ်နှစ်တန်း တက်မှာလဲ။
ကိုယ်တော်လေး ကို တွေ့ဖို့ မကြုံလိုက်တာ စိတ်မကောင်းဘူး။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: မားသားက နီယိုကွန်​ဇာ​ဗေးတစ်​ဗ်​ဇင်​မ်​
အရီး​ပေးတဲ့ ဆိုလာရို​ဘော့အမျိုးမျိုးဆက်​ပြီး ​ဆော့ပြီး ​ပျော်​​နေ​လေရဲ့
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟမ်မယေး … ရေခဲမုန့်အကြောင်းတော့ မပြောပါနဲ့ … စိတ်နာလွန်းလို့…
ရေခဲစားမရတဲ့ ချစ်ဇနီးမယ်ဗိုက် … ဆေးရုံကအပြန် ရေခဲမုန့်တွယ်ပြီး…
ဆီးကျင်သလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးနေလိုက်တာ … ကလေးမွေးသွားပါရောလား…
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဦး​လေး​ပြောပုံအရဆို
​ကျော်​ ဂျမခန္ဒာမှာ ​ရေခဲမုန့်​ဆိုင်​သွားဖွင့်​ရ​တော့မလို
No more Ingulimala
အောင် မိုးသူ says: ကျတော် ဘေဘီကွန်း စားချင်လို့ဘာလုပ်တယ်မှတ်လည်း။ ဈေးမှာ ပြောင်းဖူးရောင်းတဲ့သူနားကပ်သွားပီး သူတို့ လွှင့်ပစ်တဲ့ အခွံတောင်းထဲကနေ ဘေးမှာကပ်နေတဲ့ ဘေဘီကွန်းလေးတွေ ကိုယူပြီးအိမ်ကျမှ နွှာတာ။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အစက​တော့ ​ဘေဘီကွန်းမကြိုက်​ဘူးရယ်​
​နောက်​ပိုင်းကျ​တော့ ​ဘေဘီကွန်းမပါတဲ့အစိမ်း​ကြော်​ဆို စားမရတဲ့အထိပဲ
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: ပြောင်ဖူးဖုတ်သုတ်ကို ရှက်ကီလေးနဲ့ တွတ်ရင်.. နှလုံးကောင်းဒယ် ဆြွာဂီ့လေ.. :D
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ကြက်​သွန်​​ရှောင်​မှဗျ
ဂျက်စပဲရိုး says: ရှမ်းပြောင်း ကို ကြော်စား
မြန်မာပြောင်း ကို ပြုတ် ပြီးတော့ ချွေပြီး ဆီလေး ဆားလေးနဲ့ နယ်စားရတာဟာဖြင့်….
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ငယ်​ငယ်​က ရှမ်းပြည်​ဘက်​ ဆန်​ရှားလို့ ​ပြောင်းပဲစားရတယ်​လို့ ဖတ်​ဖူးကြားဖူးတုန်းက
အဲ့လူ​တွေကိုမဟာကံထူးရှင်​​တွေလို့ ထင်​ဖူးတဲ့အထိ ​ပြောင်းဖူးကိုနှစ်​သက်​ခဲ့ဖူးရဲ့
Mike says: .ကိုယ်တော့ ကိုယ်ဘာကိုအသေအလဲကြိုက်သလဲ စဉ်းစားမရ…
.အော..ဒညင်းသီးတော့ အတော်ကြိုက်…လိုက်သာရှာမစားတာ..တွေ့ရင်တော့မနေနိုင်ဘု Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ​ယောက်ျားမှာဆီး မိန်းမမီး တဲ့ခည
ဒညင်းသီးက ဆီးမှာ ​ရှော့စိတယ်​
သူက ​ဒေါက်​ဖိနပ်​ အဲ့​လေ ​ကျောက်​ကပ်​ကို တယ်​ဒုက္ခ​ပေးတာကလား
Ma Ei says: မိမိဂီ လိုဘဲ…
ပြောင်းဖူးလဲ တနှစ်တစ်မျိုး အမျိမျိုးအသစ်တွေ ပြောင်းလေခြင်းနော်…
ဟော်တယ်ပြောင်း ဘေဘီကွန်း သကြားပြောင်း ရှမ်းပြောင်း ပံပြောင်း ပတ္တမြားပြောင်း ….
padonmar says: ကျုပ်တို့တော့ သရက်လည်းကြိုက်၊ပြောင်းဖူးလည်းကြိုက်၊ရေခဲမုန့်လည်းကြိုက်ပဲ။
Ma Ma says: အကြိုက်ဆုံးကိုရေးရရင်တော့ ပိန္နဲသီးးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4021
manawphyulay says: ပြောင်းဖူးစားတာလည်း ယတြာတစ်မျိုးပဲ မိဂီရဲ့။ ပြောင်းဖူးဆိုတဲ့အတိုင်း နေရာမြဲနေတော့တာပါပဲ။ ဟုတ်တယ်မလား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ပိန်းနဲသီး တစ်လုံးလုံး တြောက်ထဲစားပီး စားပိုးနင့်ဖူးတာတော့မှတ်မိတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အလုံးလိုက်​ အာမထိလျှာမထိ မျိုချလိုက်​​လေသလားကွယ်​
မွသဲ ( 17082011 ) says: အင်းနင့်အလှည့်ကျပြောင်းဖူးဝေရတော့မှာပေါ့နော်မိမိဂီ။ ငါကတော့ ဘာမှကြိုက်လှတယ်မရှိပါဘူးအေ။
ဦးကြောင်ကြီး says: … မိမိဂိ ကြည့်မိသည် အိစိကလီ ခိခိယီ
uncle gyi says: ကိုယ်ကြိုက်ရာကိုယ်ကောင်းးသပေါ့တော်တဲ့